'Kuyancomeka ukwehla kwesibalo sabashona ezingozini zomgwaqo' | News24
LAST UPDATED: 2018-11-20, 18:57
'Kuyancomeka ukwehla kwesibalo sabashona ezingozini zomgwaqo'
Durban - Inhlangano i-Automobile Association of South Africa ikholwa wukuthi abashayeli sebeyayihlonipha imithetho yomgwaqo.
ULayton Beard we-AA uncome lokhu ngemuva kokuba uMnyango wezokuThutha umemezele ukuthi isibalo sokushona kwabantu ezingozini zomgwaqo ngesikhathi samaholidi kaKhisimusi sehle ngo-11% uma kuqhathaniswa nesikhathi samaholidi kaKhisimusi ango-2016/2017.
OLUNYE UDABA:Umnyango wezokuthutha uthi izingozi zingagwemeka ngokushayela kahle
"Sehlile isibalo sabashayeli abathola amathikithi ngokuhamba ngesivinini esiphezulu kanti lokhu kutshengisa ushintsho kubashayeli. Lokhu kuyasikhuthaza futhi kuyethembisa ukuthi izinto zisengaguquka," esho.
UBeard ukholwa wukuthi ukusetshenziswa kwama-meter taxi kungenzeka ukuthi nakho kusizile ekwehliseni izingozi zomgwaqo.
"Iningi labantu likuqaphele ukuthi zikhona ezinye izinto zokuhamba ezingasetshenziswa ukuba bafike bephephile emakhaya. Babonile ukuthi asikho isidingo sokuzishayelela uma bekade bezikhiphile ebusuku. Lokhu kuyinto okufanele igqugquzelwe," ephetha.